मोदीको मेकअप खर्च ८० लाख ? यसरी गर्छन् मेकअप::आर एम खबर
मोदीको मेकअप खर्च ८० लाख ? यसरी गर्छन् मेकअप
एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यतिबेला पुन चर्चामा आएका छन् । हाल भारतमा चुनावको माहोल चलिरहँदा कुनै न कुनै मन्त्री तथा नेताहरुको अनौठो र रोचक किस्साहरु निक्लिरहेका छन् । यसबीच मोदीलाई लिएर पनि यतिबेला भारतमा एउटा मिडियो निकै भाईरल भईरहेका छन् । जुन भिडियोमा दाबी गरिएको छ की मोदीले आफनो मेकअपका लागि हरेक महिना ८० लाख भारु खर्च गर्ने गर्छन् । करिब ४५ सेकेन्डको उक्त भिडियोमा केही व्युटीशियन र स्टाइलिस्टहरु मोदीको वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ ।
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भिडियो निकै भाइरल भएपछि जनताहरुले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले मोदीमाथि गाली बर्साउदै आफनो आक्रोस पोखिरहेका छन् । अधिकांशले उक्त भिडियो सेयर गर्दै लेखेका छन् “यी हुन गरिबका छोरा मेकअप गरिरहेका छन् । आरटीआईको माध्यमबाट खुलासा भएको छ की यीनको मेकअपका लागि व्युटीशियनलाई प्रति महिना ८० लाख पारिश्रृमिक दिईन्छ” ।उक्त भिडियो कांग्रेसले समेत खुबै सेयर गरेको थियो । उक्त भिडियो यति भाईरल भयो की यसको खोजतलास गर्दा पुष्टी भएको छ की भिडियो मोदीकै हो तर ती उनका व्यक्तिगत व्युटीशियन होईनन् ।
वास्तवमा यो भिडियो सन २०१६ को हो जुन बेला भिडियो लन्डनस्थित मैडम तुषाद म्युजियमले आफनो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको थियो । उक्त भिडियो मोदीको मोमको पुत्ला बनाउँने समयमा पोस्ट गरिएको थियो । यता प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने मोदीको कोही व्यक्तिगत व्युटीशियन नभएको र उनले लगाउने पहिरनको खर्च समेत उनी आफैले उठाउने गरेको बताएको छ ।